Tonga amin'ny iPad ny sary HDR amin'ny beta faharoa amin'ny iOS 7 | Vaovao IPhone
Ny HDR na High Dynamic Range izay nadika tamin'ny teny Espaniôla dia ho sary avo lenta Izy ireo dia sary namboarina tamin'ny alàlan'ny sary mitovy 3 nefa samy hafa ny fisehony: ara-dalàna, tsy voafaritra ary mihoapampana. Ireo sary ireo dia matetika alaina amin'ny alàlan'ny fakantsary SLR indray mandeha ary avy eo, amin'ny alàlan'ny programa solosaina, azontsika atao ny manatevin-daharana azy ireo hamorona sary iray tsy mitovy amin'ny voalohany.
Ao amin'ny beta faharoa an'ny iOS 7 dia tonga ireo sary HDR mankany iPad raha tonga tao amin'ny iSO 4.1 ilay fampiasa tamin'ny iPhone. Betsaka ny fiasa vaovao nampidirin'i Apple tao amin'ny beta faharoa an'ny iOS 7, saingy ity dia iray amin'ireo manintona ny saina indrindra amin'ireo mpaka sary miaraka amin'ny iPad. Andao jerena akaiky ny famoronana HDRs miaraka amin'ny ohatra hita maso:
Ity fiasa vaovao ao anatin'ny fampiharana Camera ity dia mamela antsika hanao ao anatin'ny segondra vitsy Sary 3 amin'ny maody telo: tsy misongadina, normal ary overexposed; avy eo ny iPad dia hanambatra ny sary rehetra ho lasa sary mavitrika be toa ilay hitanao etsy ambany.
mazava tsara tsy hanana kalitao loatra isika satria ity sary ity dia nalaina tamin'ny fakantsary reflex ary namboarina tamina programa informatika. Misaotra an'i Gizmodo afaka jerentsika hoe ahoana ny endrik'ilay sary namboarina tamin'ny iPad raha oharina amin'ny HDR Farany:
Ho hitantsika izay tsy ampoizina hafa mbola namboarin'ity beta faharoa an'ny iOS 7 ho antsika ity, izay tsy dia ratsy amin'ny tompona iPad rehetra izao. Araho hatrany ny momba ny iPad News, hampahafantatra anao ny vaovao rehetra momba ity beta faharoa an'ny iOS 7 ity izahay.
Loharano - Gizmodo y 9to5mac
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ny sary HDR dia tonga amin'ny iPad amin'ny beta faharoa an'ny iOS 7
Despicable Me: Minion Rush, lalao mahafinaritra tokoa